Boris Berezovsky oo geeriyooday - BBC Somali - Warar
Boris Berezovsky oo geeriyooday
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 23 Maarso, 2013, 19:38 GMT 22:38 SGA
Boris Berezovsky wuxuu lahaan jiray Balaayiin dollar, laakiin ka qasaartay.
Boris Berezovsky, oo ahaa ganacsade Ruush ah oo ka soo horjeeday madaxweyne Putin ayaa ku geeriyooday gurigiisa London.
Mr Berezovsky, ayaa sameeyay lacag bdan 1990 meeyadii, kadib markii Midowgii Soofiyeeti uu burburay, isagoo aad ugu dhowaa Madaxweynihii Yelstin.
Wuxuu ka mid ahaa dadkii madaxweyne Putin ka caawiyay inuu xulkunka qabsado sanadkii 2000, laakiin wuxuu ku noqday mucaarad isagoo ku dhaleeceeyay dagaalka Chechniya, iyo xoriyada saxaafada, kadibna wadanka ayuu ka baxay.
Sanadihii ugu danbeeyay waxaa lagu yeeshay lacago badan, kadib markii uu qasaaray balaayiin dollar.